အလိုတူတွေပါဘဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အလိုတူတွေပါဘဲ…	4
Posted by Ko out of... on Jul 20, 2015 in Creative Writing, Think Different |4comments
နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာသူတို့ကို အတိုက်အခံလုပ်ရင် ဖမ်းစီးမယ်….အပြစ်ပေးအရေးယူမယ်…. ထောင်ချမယ်….
ထို့အတူ ဘာသာရေးသမားတွေလည်း သူတို့နဲ့မတူ သူတို့၏ရန်သူလုပ်ပြီး ဖမ်းစီး..ထောင်ချ…အပြစ်ပေး…အရေးယူတာချင်း တူလေတော့… တရားစစ် တရားမှန်ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲလို့စဉ်းစာမိတယ်….
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ အဏာရှင်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့…ကောက်ကျစ်ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘဲရှိတယ်…
ထို့အတူဘဲ မြန်မာပြည်မှာ အဏာရှင်ဘုန်းကြီးနဲ့…အမြင်ကျည်းမြောင်းသည့် ဘာသာရေးသမားတွေဘဲ
နေရာ ယူနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့အလှမ်းဝေးနေဦးမယ်လို့မြင်မိပါကြောင်း………
အောင် မိုးသူ says: ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ
မြစပဲရိုး says: Hi Ko Out of…
Long time No see. :-))
ကျွန်မ ဒီမှာ တရာ တော့ ရဘူး။
ဆယ့်နှစ် တော့ တိုးပြီ။ jk :-)))
kai says: အတွေးအခေါ်တို့ရဲ့…မူလဘူတဟာ..ဘာသာရေးဖြစ်တာမို့…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော် သိသလောက်ပြောရရင် နိုင်ငံရေး က ဘာသာရေးနဲ့နွယ်နေတာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပါဘဲ
ကျနော်တို့နိုင်ငံတင်မဟုတ် အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလဲ အတူတူ ပါဘဲ
အမြဲဆန့်ကျင့်ဘက်ဖြစ်နေတာ သဘာဝ ကျ ပါတယ်